Himalaya Dainik » यी हुन् कम पढेका चर्चित ५ बलिउड अभिनेत्री
बलिउडमा प्रबेश गरेका नायक नायिका सबै उच्चित भने हुदैनन् । उनीहरुमा केहि न केहि कुराकाे कमि पक्कै हुन् तर याे बलिउडमा मात्र नभइ सबै मान्छेकाे जिवनमा हुने एक किसिमकाे काल्पनिक घटना हाे भन्दा पनि फरक पर्दैन ।
त्यस्तै, बलिउडमा केहि फरक फरक शैलिका नायिकाहरु छन् जसले अभिनयको जादु नै देखाएका छन्। तर भने उनीहरुकाे जिवनकाे बारेमा भने खासै सामाजिक संजालमा खुलाउ चाहादैनन् ।
यी नायिका जसले बलिउड कलाकारिता क्षेत्रमा सबै भन्दा थाेरै पढेका छन्, ती नायिकाहरु भने निकै चर्चामा रहेका छन् र उनीहरुकाे धेरै फ्यान फलोअर्स पनि छन्।
यसैगरी सामाजिक संजालमा दर्शकहरुकाे केहि गुनासाे र प्रस्नहरु पनि उब्जिन्छन्,जस्तै,उनीहरुकाे जीवनयापन कसरी बितिरहेकाे छ र उनीहरुकाे बाल्यकाल कसरी बितेकाे थियाे ? उनीहरुले कति पढेका छन् ? उनीहरुकाे घर परिवार कति छ ? घरमा के गर्छन् ? यस्ता धेरै प्रश्न दर्शकहरुले साेध्ने गरेका हुन्छन् । धेरैलाई यस्ता नायिकाको अध्ययनबारे भने जानकारी नहुन सक्छ।
कतिपय ठाउँमा प्रतिभा र क्षमता भए पढाइले मात्रै अवसरबाट वन्चित गर्दैन भन्ने उदाहरण पनि हुन् यी नायिका। बलिउडकी चर्चित पाँच नायिका, कसको पढाइ कति ?
कट्रोभर्सी क्विनका नामले चर्चित राखी सावन्तको वास्तविक नाम निरु भेदा हो। राखीले कलेज तहसम्म अध्ययन गरेकी छन्। राखी मुम्बई उत्तर–पश्चिम लोकसभा सिटमा निर्दलीय क्यान्डिडेटका रुपमा चुनाव लडेकी थिइन्। जसमा उनले आफ्नो शैक्षिक योग्यता अनपढ बताएकी थिइन्। उनले यस्तो किन भनेकी हुन् भन्नेबारे भने केही खुलेन।
मुम्बईको आर्य विद्या मन्दिरमा १२ सम्मको पढेकी सोनम कप्रले ब्याचलरका लागि भर्ना त गरिन् तर पढाइ बीचमै छोडिदिइन्। अध्ययन बीचमै छोडेर उनले फिल्मी करिएर सुरु गरेकी हुन्। एक अन्तर्वार्तामा सोनमले १२ को अध्ययन पछि पढाइ छोडेर अभिनय यात्रा सुरु गरेको बताएकी थिइन्।
करिश्मा कपुरको पढाई झनै कम छ। उनी पाँच कक्षा पास मात्र भएकी छन्। छ कक्षामा पढ्दै गर्दा उनले पढाइ छोडेर आफ्नो अभिनय यात्रा सुरु गरेकी हुन्। करिश्मा ९० को दशककी सफल अभिनेत्रीमध्येकी एक हुन्।
‘राजी’, ‘गली ब्वाई’ जस्ता हिट फिल्म दिएकी आलियाले धेरै पढे लेखेकी छैनन्। फिल्म ‘स्टुडेन्ट अफ इयर’ बाट फिल्ममा डेब्यु गरेकी आलियाले स्कुल जीवनपछि फिल्मी करियर सुरु गरेकी हुन्। फिल्ममा लगातार अफर आउन थालेपछि आलियाले १२ कक्षासम्मको अध्ययन मात्र गर्न सकिन्।
बलिउडमा अफ्नो दममा फिल्म हिट गराउन माहिर एक्टर कंगना रनौत १२ कक्षामा फेल भएकी थिइन्। फेल भएसँगै उनले उच्च शिक्षाको आगामी यात्रामा पूर्णविराम लगाइदिएकी थिइन्। यसपछि उनी मोडलिङका लागि दिल्ली हुँदै मुम्बई आएकी थिइन्। कंगनाले सुरुसुरुमा आफ्नो इङ्लिसका कारण निकै मजाक उडाउने गरेको कुरा पनि थुप्रै पटक सम्झिने गरेकी छन्।